यी ७ चिज घरमा भए हुन्छ वास्तुदोष
पाेखरा २८ पुस- यदि विश्वास गर्नुहुन्छ भने केही चिजहरुका कारण घरमा समस्या सिर्जना भएको हुन्छ । ती चिजहरुमा वास्तुदोष हुने हुँदा जसलाई हटाउनु नै उपयुक्त मानिन्छ । जसले ठूलो समस्या टर्ने विश्वास गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा बन्न लागेको काम नबन्ने, आर्थिक संकट बेहोरिरहनुपर्ने र चाहे अनुसारको कामबाट लाभ नहुने जस्ता अप्ठेरा भोगिरहनु भएको छ भने पक्कै वास्तुदोष भएको हुनुपर्छ ।
१. टुक्रेको ऐना- धेरै मानिसहरुलाई फुटेको वा चर्केको ऐना राख्नु हुँदैन भन्ने थाहा छ । तर किन यस्तो घडी राख्नु हुँदैन भन्ने चाहि थाहा नहुन सक्छ । चर्केको वा फुटेको ऐना राख्नु वास्तुमा सबैभन्दा नराम्रो मानिन्छ । यसले घरमा नकारात्मक उर्जा उत्पन्न गराउनुको साथै परिवारका सदस्यहरु बिच झगडा वा मानसिक तनाव बढाउने गर्दछ । तसर्थ फुटेको वा चर्केको ऐना घरमा राख्नु उपयुक्त मानिदैन।
२. चर्किएको ढोका- कुनै पनि घर वा कोठा प्रवेश गर्ने मार्ग भनेको ढोका हो । तसर्थ ढोका जहिले पनि कुनै दोष युक्त हुनुहुँदैन । अन्यथा घरभित्र छिर्ने ढोका चर्किएको, टुक्रिएको वा फुटेको भएमा यसले अशुभ प्रभाव पार्दछ । यसले घरमा नकारात्मक उर्जा उत्पन्न गराउने शास्त्रले बताउँछ । तसर्थ यस्ता ढोका तुरुन्त मर्मत वा परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।
३. भाँचिएको खाट/पलङ- विशेषतः नवविवाहित जोडी वा दाम्पत्य जीवनमा बाधिएका जो कोहिले पनि भाँचिएको पलङ वा खाटमा सुत्नु हुँदैन । वास्तु अनुसार भाचिएको खाटमा सुत्नु नकारात्मक मानिन्छ । यसले वैवाहिक जोडीको जीवनमा खटपट तथा तनाव सिर्जना गर्दछ । तसर्थ भाँचिएको खाट वा पलङ मर्मत गर्नु वा फेर्नु उत्तम हुन्छ ।
४. च्यातिएको तस्वीर- पुराना स्मृति भन्दै अधिकांशले केही च्यातिएका तस्वीरलाई पनि अन्य तस्वीरको बिचमा राख्ने गर्दछन् । तर घरमा राखिएका च्यातिएका तस्वीरले घरभित्र नकारात्मक प्रभाव बढाउने तथा परिवारजनमा रोगको सम्भावना बढाउने शास्त्रले बताउँछ । तसर्थ च्यातिएका तस्वीरलाई फोटो स्टुडियोमा गई अर्काे प्रति निकालेर संग्रह गर्नु उत्तम हुनेछ ।
५. टुटेफुटेका भाडाकुँडा- भान्सामा पुराना तथा टुटेफुटेका भाँडाकुँडा हुने गर्दछ । तर यस्तो भाडाँकुडाँ राख्दा देवी लक्ष्मी रिसाउने, त्यस घरमा आर्थिक संकट शुरु हुने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ घरमा टुटेफुटेका भाडाँकुडाँ राख्नु हुँदैन ।
६. फुटेको फर्निचर- दैनिक उपयोग गरिने भएकाले पनि घरमा रहेका कतिपय फर्निचरका सामाग्री फुटेको हुनसक्छन् । तर वास्तु अनुसार घरमा फुटेको फर्निचर हुनु अशुभ मानिन्छ । यसले घरमा अशान्ति फैलाउने विश्वास गरीन्छ । तसर्थ यस्ता टुटेफुटेका फर्निचर सकेसम्म तुरुन्त मर्मत गरिहाल्नुपर्छ ।
७. बिग्रेको वा चर्केको घडी- केही मानिसहरु बिग्रेको वा सिसा चर्केको घडि पनि लगाउने वा भित्तामा झुण्डाउने गर्दछन् । तर यस्तो घडी आफूसँग राख्नु वास्तु अनुसार अशुभ मानिन्छ । यसले परिवारमा उन्नती र राम्रो दिनलाई रोक्ने गर्दछ । तसर्थ जतिसक्दो चाँडो बिग्रेको वा चर्केको घडि बनाउनु वा फ्याक्नु उत्तम मानिन्छ ।